दुलालको मृत्यु आघिको फेसबुक पोस्ट,‘कोरोनासँग लड्ने हो,डराउने होइन,श्रीमतिसँग डराउने हो लड्ने होइन।किनकि दुबै को औषधि छैन। – Namaste Dainik
दुलालको मृत्यु आघिको फेसबुक पोस्ट,‘कोरोनासँग लड्ने हो,डराउने होइन,श्रीमतिसँग डराउने हो लड्ने होइन।किनकि दुबै को औषधि छैन।
May 20, 2020 NamastedainikLeaveaComment on दुलालको मृत्यु आघिको फेसबुक पोस्ट,‘कोरोनासँग लड्ने हो,डराउने होइन,श्रीमतिसँग डराउने हो लड्ने होइन।किनकि दुबै को औषधि छैन।
काठमाण्डौं,७ जेठ । आफ्नै श्रीमतिद्धारा मा रिएका विराटनगरका औषधी व्यवसायी देवीप्रसाद दुलालले ह त्या हुनु अघि लेखेको फेसबुक स्टाटसले शंका उब्जाएको छ । अन्य दुई सहयोगीको साथ लिएर श्रीमतिले नै दुलालको ह त्या गरेकी थिइन् । ह त्याको मुख्य योजनाकार श्रीमती मिना श्रेष्ठ दुलाल रहेको र ह त्यामा गर्ने विराटनगरकै ब्रह्मदेव साह र इटहरी १२ खनारका सोनु साह छन् ।
मृ तक दुलालले मे ५ मा फेसबुकमा लेखेका थिए,‘कोरोनासँग लड्ने हो,डराउने होइन । श्रीमतिसँग डराउने हो लड्ने होइन,किनभने दुबैको अहिलेसम्म औषधी बनिसकेको छैन ।’यो स्टाटसबाट श्रीमतिबाट आफूमाथि खतरा भै रहेको संकेत दुलाललाई थियो भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । उनले रमाइलोका लागि पनि यो स्टाटस लेखेका हुनसक्छन् ।
प्रहरीका अनुसार चार वर्षअघिदेखि पाँच महिनाअघिसम्म ब्रम्हदेव दुलालको माँ देवी पाथिभरा फर्मामा काम गरे । यो बीचमा दुलालकी श्रीमतीसँग ब्रम्हदेवको हिमचिम बढेको थियो ।
श्रीमतीसँगको सम्बन्ध थाहा पाएका कारण श्रीमान्–श्रीमतीमा बेमेल थियो। आफ्नो श्रीमानले गरेको व्यवहार मीनाले ब्रम्हदेवलाई सुनाउँथिइन् । उनले श्रीमानलाई सबक सिकाउने योजना रहेको बताउँथिइन् । ब्रम्हदेवले गत माघमा विवाह गरेको थिए । तर मीनासँगको संवाद निरन्तर चलिरहेको थियो ।
शनिबार राति एउटा बेडमा श्रीमती मीना र ८ वर्षीय छोरा सुतेका थिए । दुलाल छुट्टै बेडमा सुतेका थिए ।ह’त्याको पूर्व योजनासहित मीनाले बोलाएपछि शनिबार राति ब्रम्हदेव र सोनु डोरी र ह’त्याका लागि प्रयोग हुने सर्जिकल ग्लोब्स लिएर आएका थिए । फिङ्गर प्रिन्ट देखिने डरले उनीहरूले ग्लोब्स लगाएका थिए ।
शनिबार राति दुलालको घरमा औषधि व्यवसायी हरिमोहन श्रेष्ठ र धनबहादुर काफ्ले पुगेका थिए । साथी पुगेपछि दुलालले खानापानको व्यवस्थापन गरे । दुईजना राति करिब नौ बजे दुलालको डेराबाट निस्किएका थिए ।
म दिरा सेवन गरेका दुलाल कोठामा सुत्न गए । मीना र दुलाल एउटै कोठाको छुट्टा छुट्टै खाटमा सुत्छन् । श्रीमान सुत्न गएपछि ब्रम्हदेवलाई बोलाउँछिन् । न्यूरो अस्पतालको फेसबुक फार्मेसी अगाडि मोटरसाइकल राखेर पैदल दुलालको डेरा पुगेका ब्रम्हदेव र सोनुलाई सिँढीमा लुक्न लगाउँछिन् ।
आधा घण्टापछि मीनाले इसारा गर्दै ढोका खोल्छिन् । भित्र कोठामा दुलाल सुतिरहेका थिए । म दिराको नसामा सुतेका दुलालको घाँटीमा ब्रम्हदेवले डोरीले कस्छन् ।
सोनुले उनको खुट्टा समात्छन् । यो बीचमा दुलालले प्रतीकार गर्न खाजेका छन् । प्रतीकार गर्दा उनको निधार झ्यालमा ठोक्किएर चोट लागेको थियो भने घाँटीमा कस्सिएको डोरी चुँडिएको थियो ।
दुईजनाले ह’त्या गरिरहँदा श्रीमती मीनाले पनि सघाइन् । सास चल्न बन्द भए पनि उनीहरूले ब्रम्हदेव र सोनुले छाड्दैनन् । पेट र शरीरका अन्य भागमा लात्तीले हान्छन् ।
ह त्याका क्रममा संघर्ष चल्दा दुलालको घाँटीमा गहिरो डाम बसेको थियो। डाम देखिएपछि छोप्न भन्दै मीनाले एक बट्टा पोन्ड्स पाउडर लगाइदिइन्। ११ बजेदेखि करिब आधा घण्टाको प्रयासमा दुलालको ज्यान गयो । तर ह त्यापछि तीनजना दुई बजेसम्मसँगै बसे ।
२ बजेपछि सोनु र ब्रम्हदेव निस्किएपछि मीनाले छिमेकी र देवीप्रसादका साथीलाई फोन गरी श्रीमान अुचेत छन् भन्दै बोलाइन् । एम्बुलेन्समा हालेर गोल्डेन अस्पताल ल्याएका थिए । अस्पतालले मृुत घोषणा गरेपछि मीना रुन थालेकी थिइन् ।
दुलालको घर सुनसरी खनार हो । तर करिब ६ वर्षयता उनी विराटनगरमा बसेर माँ देवी पाथिभरा फर्मा सञ्चालन गरिरहेका थिए ।
मीना श्रेष्ठसँग उनले १० वर्षअघि प्रेम विवाह गरेका थिए । उनका ८ वर्षीय छोरा छन् । उनीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि डेनमार्क पनि पुगेका थिए ।
मनिषा कोइरालाको त्यो ट्विट भारतीय मिडियामा भाइरल ! नेपालको पक्ष लिँदा चर्चा
‘धन्धा गर्छेस नेपाली…’ भन्दै भारतीय सिरियलमा नेपाली महिलाको अ-पमान
विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारका लागि उडान तालिका सार्वजनिक
July 28, 2020 Namastedainik
कोरोना संक्रमणबाट वीरगञ्जमा आज थप दुई जनाको मृत्यु, लक्ष्ाण अर्कै l
दुई महिनापछि सुनको मूल्य निर्धारण, छोइ नसक्नु भयो सुन ? यो हेर्नुहोस